Fandraisana ny taona vaovao : Nosantarin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny vavaka ny taona 2018 -
AccueilRaharaham-pirenenaFandraisana ny taona vaovao : Nosantarin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny vavaka ny taona 2018
Notsenaina tamim-pifaliana. Tamin’ny ankapobeny, dia samy nanana ny fomba nentiny namarana ny taona 2017 sy nandraisana ny taona vaovao 2018 ny tsirairay sy ny isam-pianakaviana. Ho an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia nanankina ny taona vaovao hodiavina tamin’ilay Nahary izy sy ny fianakaviany, ka nisantatra ny hetsika nataony tamin’ny vavaka, ka teny amin’ny Katedraly teny Andohalo no nanamarihany izany. Amin’ny maha- filohan’ny Malagasy rehetra azy, dia nitondra ny teny fiarahabana sy ny firariantsoa ho an’ny vahoaka malagasy rehetra ny filoha nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony, taorian’ny fotoam-pivavahana. Taorian’izay dia nitsidika ny tranom-bakoka teny Andohalo ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Ity rahateo ny toerana voalohany ahitana ireo vakoka sy ny tantaran’ny finagonana Katolika. Mialoha izany anefa, ny andron’ny 31 desambra, dia nitsidika sy nitondra fanampiana ho an’ireo vahoaka sahirana ihany koa ny filoham-pirenena. Hetsika nahafahan’ireo vahoaka sahirana ireo nitsena tamim-pifaliana ihany koa ny taona 2018.
Nahasarika Malagasy maro ihany koa ny fitsenana ny taona vaovao tao anatin’ny alim-bavaka, ary toerana maro no nandray izany niarahana tamin’ireo fiangonana samihafa. Vavaka sy hira fiderana no nentin’izy ireo tamin’izany hetsika izany.
Tetsy ankilan’izay, dia betsaka ireo nisafidy hitsena ny taona vaovao tao anatin’ny fiarahan’ny mpianakavy. Maro ireo tokantrano no nahitana taratra izay fiarahana mifaly izay. « Samy mitondra ny anjarany de miara-mifaly e », araka ny fanamarihan-dRandrianasolo, raim-pianakaviana, nampiantrano lanonam-pianakavina iray. « Amin’ny fotoana toa izao no hanamafisana ny fihavanana sy ny fifandraisana eo amin’ny mpianakavy sy ny namana akaiky », hoy ihany izy.
Fa tsy diso anjara fa feno, ary rakotra olona ihany koa ireo lanonana samihafa tetsy sy teroa tamin’ireo toerana fandihizana sy fialamboly samihafa. Anisan’ireo hetsika anisan’ny goavana niandrasana ny taona ny « Réveillon de l’année » izay notanterahina teny amin’ny CCI Ivato, ary niarahana tamin’ireo mpanakanto sangany amin’izao fotoana nahitana an-dry Stéphanie, Ndondolah sy Lucia, Rak Root’s… Tsy diso anjara ihany koa anefa ireo toerana fandihizana samihafa, indrindra ny teto an-drenivohitra.Tsy diso anjara ihany koa anefa ny tany amin’ny faritra samihafa izay niezaka namarana ny taona sy nandray ny taona vaovao tao anatin’ny fety aman-danonana. Maro tamin’ireo mpanakanto sangany ihany koa no nanafana izany raha tsy hilaza afa-tsy ry Samoëla, sy Agrad & Skaiza tany Toamasina, Nina’s tany Toliara, Oladad tany Fianarantsoa , Dah’ Mama tany Mahajanga, tarika ‘Zay teny amin’ny By Pass, Tsiliva tany Morondava…
Tsy vitsy ihany koa anefa ny nisafidy ny hamarana ny taona tamin’ny fiarahana teny an-dalambe, ary maro ireo toerana nahafahana nanatanteraka izany niaraka tamin’ny sakafo sy ny zava-pisotro izay tsy misaraka mihitsy amin’ny fety aman-danonana samihafa.